Nhau - Yegumi nembiri Shanghai International Electric Uye Electrician Exhibition
Pfumo Zvikamu & Zvishandiso
Kambani Solution Catelogs
Kambani Solution Catelogs2
Kambani Solution Catelogs3
Kambani Kunyorera Catelogs
Kambani Kunyorera Catelogs2
Kambani Kunyorera Catelogs3
The rechi12 Shanghai International Electric And Electrician Exhibition
Yakagadzwa muna 1986, EP yakarongedzwa neChina Electricity Council, State Grid Corporation yeChina neChina Southern Power Grid, yakabatanidzwa neAdsale Exhibition Services Ltd, uye inotsigirwa zvizere neese makuru maPower Group Corporations uye Power Grid Corporations. Anopfuura makore makumi matatu akabudirira rekodhi uye ruzivo, rave iro rakakura uye rinoyemurika simba rekuratidzira simba remagetsi rakagamuchirwa neUFI Yakagamuchirwa Chiitiko muChina uye yave ichizivikanwa zvakanyanya nevatungamiriri vemusika wepasirese nemasangano epasi rese ekutengeserana.
Musi waNovember 6-8th 2019, yegore rino simba indasitiri mhemberero yakaitirwa muShanghai New International Expo Center (Horo N1-N4). Chiratidziro chakagadzira nzvimbo nhanhatu dzakakosha dzekuratidzira: simba Internet, michina yekuchenjera yekugadzira, magetsi otomatiki, kutapurirana-kumwe uye kugovera, simba rekuchengetedza emergency, simba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Vanopfuura chiuru vanotungamira emagetsi nemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi kumba nekune dzimwe nyika zvinonyatsoratidza mabudiro matsva emusika wemagetsi emagetsi munzvimbo dzakasiyana.
Muchiratidziro ichi, kambani yedu, inotungamirwa nepfungwa yekupa nyowani magetsi emagetsi kuita chirongwa, chakabatanidzwa nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu mugore rapfuura, yakaparura huwandu hwemidziyo mitsva, kusanganisira CNC yemhangura bhaira yekugadzirisa nzvimbo michina, new servo system, busbar yemakona yekugaya uye yakakomberedzwa tekinoroji-yekugadzira michina yekufambisa uye yekuparadzira michina, iyo inofarirwa nevazhinji vateereri.
Mhinduro, Zvishandiso, Sales Networks UyeKufanirwa